» १० रुपैयाँमै राज्माकाे तरकारी र बासमतीकाे भात !
१० रुपैयाँमै राज्माकाे तरकारी र बासमतीकाे भात !
१० पुष २०७६, बिहीबार ०६:०६
विराटनगरमा १० रुपैयाँमै भरपेट खाना खान पाइन्छ भन्ने कुरा सुन्दा तपाईँलाई पत्याउनै गाह्रो पर्न सक्छ । तपाईँ हामीले हरेक दिन खाँदै आएको खाना छाकको न्यूनतम पनि ६० रुपैयाँभन्दा तल खानै पाइँदैन । ठूला होटलमा एक छाककै प्रतिव्यक्ति १५ सय रुपैयाँभन्दा बढी लिएको पनि पाइन्छ । तर विराटनगरको काली मन्दिरअगाडि १० रुपैयाँमा भरपेट खाना खाने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
विराटनगर ७ का समाजसेवी दिलिप धाडेवाको अगुवाइमा विराटनगरमा १० रुपैयाँमा सादा खाना खाने व्यवस्था मिलाइएको हो । कुनै समय राजापा नेपालका सह-महामन्त्रीसमेत रहेका धाडेवाले बुधबारदेखि १० रुपैयाँमा नै राज्माको तरकारी र बासमती चामलको खाना बेच्न थालेको बताए ।
विराटनगर मेनरोडस्थित काली मन्दिरअगाडि टेबल राखेर खाना बेच्न सुरु गर्नेमा विराटनगरका चार जना छन् । ठूला होटलमा सबै वर्गका मानिसले किनेर खान नसक्ने भएका कारण सस्तो मूल्यमा सबैले भरपेट खाने व्यवस्था मिलाउनका लागि यो अभियानको थालनी गरिएको धाडेवाले बताए ।
यो अभियान विराटनगरका ४ जना व्यक्तिबाट सुरु भएको हो । विराटनगरका व्यापारी नन्दकिशोर तापडिया, पवन अग्रवाल, मोहन गुप्ता र दिलिप धाडेवाले संयुक्त रुपमा नयाँ कामको थालनी गरेका हुन् । यो अभियानलाई विराटनगरका अन्य स्थानहरुमा समेत लग्ने र सस्तो मूल्यमा खाना उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको धाडेवाले बताउनुभयो । सस्तो मूल्यमा खाना खाने व्यवस्था मिलाइएपछि खाना खान आउनेहरुको संख्या बढ्न थालेको छ । पहिलो दिन मात्र ४ सय ३९ जनाले खाना खाएका छन् ।